Iinkcukacha zeprojekthi yemidlalo ye-Epic yenkululeko ngokwe-Apple: Ayisiyiyo yonke into njengoko ibonakala | Ndisuka mac
Iinkcukacha zeprojekthi yenkululeko yeMidlalo ye-Epic ngokwe-Apple: Ayisiyiyo yonke into njengoko ibonakala
Embindini wonyaka ophelileyo, ngo-Agasti, u-Apple uthathe isigqibo sokubeka bucala umdlalo we-Fortnite kwaye awusayi kuphinda ukhutshelwe kwiVenkile ye App. Ngelo xesha, kwakubonakala ngathi inkampani ye-apile yayinika isifundo semidlalo ye-Epic. Nangona kunjalo, njengokuba ixesha lihambile, kubonwe amacebo amatsha aqinisekisa oko kwaye iApple ayikhange ibe imbi okanye iMidlalo ye-Epic yenzakele isenza inkululeko yayo yeprojekthi. Zombini zidlala ukufihla, kodwa omnye wabo kuya kufuneka "azibophe."
1 Imidlalo ye-Epic yakhalaza ngokuzimela kuka-Apple. IProjekthi yeNkululeko iyilwe.
2 Ayibalwanga indlela. Ngokuka-Apple, iprojekthi yenkululeko yadalwa kuba iFortnite yayisele ikwiiyure eziphantsi
Imidlalo ye-Epic yakhalaza ngokuzimela kuka-Apple. IProjekthi yeNkululeko iyilwe.
Ukusuka kwiVenkile ye App ngaphambi kokuba udlale iFortnite. Emva komlo ophakathi kweMidlalo ye-Epic kunye neApple, le yokugqibela yagqiba ekubeni isuse umdlalo kwivenkile yeapp kwaye yohlwaye inkampani yomdlalo ngokulahleka ubuchule bayo bonjiniyela. Impikiswano iyaqhubeka ukuhlala kwaye nangona inxenye yayo isonjululwe, Abasebenzisi beApple abanakudlala iFortnite ngqo.
Abalawuli beMidlalo ye-Epic bagcina isibhengezo sokuba i-Apple isebenzise ubukhosi (yajoyina imoto okanye uloliwe osele usasazekile ngaloo ndlela) kwaye ukuba iikhomishini ezihlawulisiweyo bezisetyenziswa gadalala. Inkampani ekhokelwa nguTim Cook izikhusele izihlandlo ngezihlandlo isithi ayikhange isebenzise ubukhosi obunje, kuba loo mdlalo njengabanye abaninzi unokufunyanwa ngezinye iindlela kwaye iApple ibingeyoyokuqala kwintlawulo kwimidlalo yevidiyo. Kodwa ikwakukuzikhusela kwityala lokuhlawuliswa kwekhomishini, esithi intlawulo efanayo ihlawulisiwe ukusukela ekuqaleni (2008) kwaye wonke umntu uhlawuliswa ngokulinganayo, enkulu okanye encinci.
iapile Akanagunya lodwa okanye amandla entengiso kwimarike yemveliso efanelekileyo kwimicimbi yesicelo semidlalo. Kwaye akunakubangwa ukuba yayinawo amandla xa izithintelo ekuthethwa ngazo malunga nokuqaliswa kweVenkile yeApple.
Ezi ze-Apple zazingabonakali zikholisa ngengxoxo yabo kunye nabasebenzisi be-Fortnite ngokuya bema kwicala lomdlalo wabo. Ukukhuthazwa yimidlalo ye-Epic ababedala imicimbi ethile yomdlalo ukuxhasa ityala labo nxamnye neApple. Ngokukodwa xa kufikwa elubala ukuba iiMidlalo ye-Epic igqibe ekubeni iyiguqulele kule nkqubo ibe yi isibhengezo senjongo ngokuchasene "neenkampani ezizodwa" emnxebeni Iprojekthi yeNkululeko.
Ayibalwanga indlela. Ngokuka-Apple, iprojekthi yenkululeko yadalwa kuba iFortnite yayisele ikwiiyure eziphantsi
U-Apple uphikisa kwiifilitha zayo ezisemthethweni zokuba iVenkile yeVenkile yenze amathuba amatsha angazange abekho ngaphambili. Inkampani ithi Ivenkile yeeVenkile ibaluleke kakhulu kuqoqosho njengoko ishishini leapps lihambisa izigidi zeedola kwihlabathi liphela. Ithi "uninzi lwezicelo zikhululekile ukukhuphela," oko kuthetha ukuba inkampani ayifumani khomishini kubo.
Ngokuka-Apple, Imidlalo ye-Epic iqeshe iifemu zonxibelelwano noluntu Sele ikho ngo-2019 ukusebenza kwisicwangciso seendaba esibizwa ngokuba "yiThala lencwadi yeProjekthi" ejolise ekuboniseni iApple "njengomntu ombi." Inkampani yemidlalo yevidiyo yaqesha uCravath, Swaine & Moore LLP kunye nefemu yobudlelwane noluntu ngaloo nyaka, kwaye eli tyala sisiphelo saloo mzamo. Yenza njalo kuba, ngokuka-Apple, iProjekthi yeNkululeko yaqala xa babona ukwehla kwengeniso kunye nabasebenzisi abasebenzayo ngenyanga. Ngale ndlela, benze isicwangciso sokuhlawula iikhomishini ezingaphantsi.
Ukongeza kuko konke oku kungentla, uApple ubanga ukuba akukho monopoly enjalo kuba I-Epic yayingaphezulu kwe- $ 700 yezigidi kwingeniso Abasebenzisi be-iOS abane-Fortnite xa umdlalo wawufumaneka kwiVenkile ye App. Inkampani ihlawula ikomishini kwamanye amaqonga apho iFortnite isasazwa khona.
Iimvavanyo ngoku eziboniswe yiApple, ziya kuba nokuqhubeka Ngomhla we-3 kaMeyi xa ityala liqala apho kulindeleke ukuba abameli abakhulu beenkampani zombini yiya kuyo ngokobuqu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Iinkcukacha zeprojekthi yenkululeko yeMidlalo ye-Epic ngokwe-Apple: Ayisiyiyo yonke into njengoko ibonakala
Ivenkile entsha yeApple inokuvula iingcango zayo eBerlin
Kusemthethweni: Ukunqongophala kwe-chip kuchaphazela iApple kwimveliso yeeMacBooks ezithile.